किन चिलाउँछ हत्केला पैसा आउने जाने भ्रममा नपरौं ! यस्तो खतराको संकेत – mero sathi tv
किन चिलाउँछ हत्केला पैसा आउने जाने भ्रममा नपरौं ! यस्तो खतराको संकेत
On १२ कार्तिक २०७४, आईतवार ०५:२२
नेपालमा हल्केला चिलाउनु एउटा लक्षण हो जुन चिलाएपछी धन प्राप्त हुन्छ भन्ने बिश्वास जनसमुदायमा रहीआएको पाईन्छ । तर हत्केला चिलाउनु के धन आगमन हुने संकेत हो त ? हत्केला हाम्रो शरीरको महत्पूर्ण अंग मात्र नभएर एक संवेदनसिल अंग पनि हो । त्यसैले हत्केला चिलाएमा मानिसको दैनिक गतिविधिलाई नै प्रभाव पार्ने गर्दछ । हत्केला चिलाउनु एक प्रकारको रोग नभए पनि विभिन्न तत्वहको परिणाम हो वा रोगको नै संकेत हो ।
छालाको कोषहरु तीब्र बृद्धि भएको अवस्थामा र छालाको सतहमा जम्मा भए पनि हत्केला चिलाउँने गर्दछ । कहिलेकाँही आफै छाला कन्याउँदा पनि यस्तो समस्या उत्पन्न हुने गर्दछ । कहिलेकाँही झिंगाको संक्रममणले पनि यस्तो समस्या ल्याउँन सक्छ । झिंगा हत्केलाको माथिल्लो सतहमा बस्दा यो समस्या आँउने गर्दछ । बढी भिडभाड भएको ठाँउमा झिंगाको संक्रमण बढी हुन्छ ।
विशेष गरी बालबालिका र बृद्धबृद्धा यस्तो संक्रमणबाट प्रभावित हुने गर्दछन् । मधुमेह तथा छालाको समस्या पनि एक अर्कासँग सम्बन्धित हुने हुनाले अत्यधिक हत्केला चिलाउनु मधुमेहको पनि संकेत पनि हुनसक्छ । बेलैमाथी सावधानी अपनाउनु बुद्धिमानी हुन जान्छ ।
हत्केला चिलाउनु रोग नभए पनि विभिन्न तत्वहको परिणाम हो वा रोगको संकेत हो ।छालाको कोषहरु तीब्र बृद्धि भएमा र छालाको सतहमा जम्मा भए पनि हत्केला चिलाउँछ । कहिल्यकाहिँ आफै छाला कन्याउँदा पनि यस्तो समस्या उत्पन्न हुन्छ । विशेष गरी बालबालिका र बृद्धबृद्धा यस्तो संक्रमणबाट प्रभावित हुन्छन् । मधुमेह र छालाको समस्या पनि एक अर्कासँग सम्बन्धित हुन्छन्। तसर्थ अत्यधिक हत्केला चिलाउनु मधुमेहको पनि संकेत हो ।
हत्केला चिलाउनका केही कारण यस प्रकार छन् : प्राइमेरी बिलियरी सिरहोसिसः लिभरसँग सम्बन्धित समस्याले पनि हत्केला चिलाउन सक्छ । कलेजोमा गम्भीर समस्या नआउँदै हत्केला र खुट्टाको पैतला चिलाउँछ । चिलाउने समय र अवस्था फरक फरक हुन्छ । कहिले अकस्मात हुन्छ भने कहिले दिन वा रातमा मात्र चिलाउँछ । रगत प्रवाह गर्ने प्रणालीमा र विशेष गरी लिभरमा एसिड उत्पन्न (बाइल एसिड) हुँदा हात हत्केला चिलाउँछ । हात चिलाउने समस्या रोक्न एन्टिहिस्टामाइन दिइन्छ ।
खानेकुराको एलर्जीः खानेकुराको एलर्जीले पनि हत्केला चिलाउँछ । कसैकसैलाई कुनै खानाले एलर्जी गरिहाल्छ र त्यसको असर हत्केलामा देखिन्छ । अन्डा, बदाम, दूध र समुद्री खानेकुराले पनि कसैकसैलाई एलर्जी बनाउँछ । यी खाना खानेबित्तिकै कोहीकोहीलाई एलर्जी भइहाल्छ ।
कार्पल टनेल सिन्ड्रोमः (नाडीेको हड्डीको नसारुमा भएको चोटपछि हात र औलामा हुने पीडा) पनि हत्केला चिलाउँछ । शरिरमा मध्यम खालको नसा दबिएमा कार्पेल टनेल सिन्ड्रोम हुन्छ । अध्यधिक लेख्दा, टाइप गर्दा तथा हात र औलाहरुको बढी प्र्रयोग हुदा यस्तो अवस्था आउँछ । असन्तुलित तरिकाले हत्केला चिलाउनु कार्पल टनेल सिन्ड्रोमको संकेत हो ।
औषधी वा शल्यक्तियाको तरिकाले पनि यो सिन्ड्रोमको उपचार गर्न सकिन्छ । एस्पिरिन, आईबुप्रोफिन, कोर्टिकोस्टेरोइड्सले नसाको दबाबलाई शान्त पारी हत्केला चिलाउन रोक्छ । नशालाई दबाब दिने तन्तुलाई शल्यक्रिया गरेर पनि चिलाउने समस्या रोक्न सकिन्छ ।
इसेजमाः छालाको समस्याले पनि हत्केला चिलाउँछ । छालासमबन्धि यो रोग लाग्दा औलाहमा प्रभाव पार्छ । गर्मी र जाँडो मौसममा यसले प्रभाव पार्छ । अधिकांश इसेज्माको उचित उपचार छैन । कसरी बच्ने ?
हातको राम्रो सरसफाई र विभिन्न प्रकारका लोसन र क्रिमले हत्केला चिल्लो पार्दा धेरै हदसम्म चिलाउने समस्याको समाधान हुन्छ । छालालाई कहिल्यै पनि सुख्खा नराख्ने । चिलायो भन्दै बेस्सरी रगेडेर कन्याउनु हुँदैन् । समस्या गम्भीर भयो भने तत्काल चिकित्सकको सल्लाहमा औषधी प्रयोग गर्नुपर्छ ।
हत्केला चिलाउने समस्याबाट निको पाउन सबैभन्दा पहिला त हात चिलाउनुको कारण बुझ्नु पर्छ । हत्केला चिलाउनुका विभिन्न कारण हुन्छन् । जाडो याममा हुने सुख्खा छाला वा बेस्सरी हात घोटेर धुदा पनि चिलाउने भएकोले ढुंगा वा जालीले हत्केला रगेड्नु हुँदैन ।
बस दुर्घटनाको कारण त यस्तो पो रैछ ।के हतार छ र बिस्तारै जाउन गुरु जि
त्रिशूली बस दुर्घटनाः मृतकको संख्या ३१ पुग्यो मृतकमध्ये २० जनाको सनाखत नामावली यसप्रकार छन्